ဘယ်လမ်းကြောင်းက ပိုကောင်းနိုင်ပါသလဲ။ for - MYSTERY ZILLION
ဘယ်လမ်းကြောင်းက ပိုကောင်းနိုင်ပါသလဲ။ for
April 2010 edited April 2010 in Programming
Php ကိုလေ့လာလို့ အတော်လေးရေးတက်လာပြီဆိုရင် လိုင်းကွဲလေးတွေရှိလာမယ် ထင်တယ်။
1.php from scarch
3.wordpress, joomla, phpbb, ...
မြန်မာပြည်အတွက်ဘယ်လမ်းကြောင်းက ကောင်းပါသလဲ။ ပြည်ပမှာ ရေးနေသူတွေရော ဘယ်လမ်းကြောင်းက ပိုအသုံးများပါသလဲ။
wailynnoo wrote: »
I'm using CodeIgniter framework and ornagai used that framework. Our company use own company framework and wordpress.
It's base on client.
PHP from scratch က framework သုံးသည် ဖြစ်စေ မသုံးသည်ဖြစ်စေ ရေးလို့ရပါတယ်။
မှာ ကျွန်တော် ရေးထားတာလေးတွေ ရှိပါတယ်။
ပုံမှန် blog လောက်ပဲဆိုရင် wordpress လောက်နဲ့ အဆင်ပြေပေမယ့် ornagai လို project က wordpress ကော joomla နဲ့ ကော ဖန်တီးလို့မရဘူး။
အဓိကက လုပ်မယ့် project ပေါ်မှာ မူတည်ပါတယ်။